Musharaxiinta Jubbaland oo shuruudo Culus ku xiray ka qeyb galka Doorashada | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaMusharaxiinta Jubbaland oo shuruudo Culus ku xiray ka qeyb galka Doorashada
Musharaxiinta Jubbaland oo shuruudo Culus ku xiray ka qeyb galka Doorashada
7th August 2019 Arimaha Gudaha, Wararka Maanta 0
Musharaxiinta u taagan qabashada Xilka Madaxweynaha dowlad Gooleedka Jubbaland ayaa shuruudo ku xiray ka qeyb galka Doorashada Madaxtinimada maamulka Jubbaland oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo Magaalada Kismaayo.
Musharaxiinta Jubbaland ayaa sheegay in aysan ku qanacsaneyn Guddiga Doorashooyinka ee haatan shaqeynaya,isla markaana Codsaday in isbedel lagu sameeyo Guddiga,lana magacaabo Guddi Cusub.
Waxaa kaloo ay Codsadeen Musharaxiinta in Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka goob joog ka ahaadaan Doorashada.
Sidoo kale Musharaxiinta ayaa shalay kulan la qaatay Guddi ka socday Urur Goboleedka IGAD ee ku sugan Magaalada Kismaayo,kuwaasi oo halkaas u joogay u kuurgalida hannaanka doorashooyinka Jubbaland.
Hoos ka Akhriso Shuruudaha.
In la kala diro guddi ku sheega doorashada Jubbaland.
In la magacaabo guddi doorasho oo cusub
In odayaasha dhaqanka rasmiga ah oo kaliya ay xildhibaanada so xulaaan
In halkii boos hal magac oo kaliya uu odey dhaqameedku soo gudbiyo
In doorashada lagu qabto goob dhex-dhexad ah sida Xerada UN-ka
In ay AMISOM ay ilaaliso amniga doorashada iyo kan musharixiinta
In Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka goob joog ka ahaadaan doorashada.
In warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxaligaba ah ay doorashada si toos ah u tabiyaan.
Daawo Sawirro:-Guddoomiye Cabdi Xaashi oo Qaabiley Safiirka Qatar ee dalka…
Ciidamada DANAB oo deegaano hor leh oo la wareegay